ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၂ ~ pyidawoo
မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၂
3:19 AM Pyidawoo No comments
... မဇ္ဈိမယာန (ဓမ္မယာန)အဖွဲ. သို. ပေးစာ (၂)
...ဓမ္မယာန အဖွဲ.သူ/သားများသို. ၁၉-၂-၁၁
အဖွဲ.ဝင်တွေ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ. လူငယ်ဖွံ.ဖြိုးရေး အလုပ်တစ်ခု အစပြုခဲ့ကြပါပြီ။ အစမှာ ဖြစ်တဲ့ (အာရမ)္ဘ ထကြွလုံ.လနဲ. လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ကောက်ရိုးမီးလို ဝုန်းခနဲတောက်ပြီး ဝုတ်ခနဲ ငြိမ်းသွားတာမျိုး မဖြစ်ဖို. မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ဘယ်အလုပ်မဆို အခက်အခဲဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အခု လုပ်နေရင်းကနေ အခက် အခဲသော် လည်းကောင်း စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတာသော် လည်းကောင်း ဆန်.ကျင်ဘက် အဖျက်တရားတွေ အခက်အခဲ မျက်နှာဖုံးအမျိုးမျိုးနဲ. ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အခါမျိုးမှာ အပျင်းတရား အကြောက်တရားတွေကို ခါထုတ်ပစ်နိူင်တဲ့ (နိက္ကမ) မဆုတ်မနစ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ လုံ.လမျိုးရှိပါလို. အားပေးပါရစေ။ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိူင်ပြီးနောက်လည်းပဲ စမိတဲ့ အလုပ် ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိူင်ဖျားရောက် ပန်းတိုင် ပေါက်အောင် အရောက်သွားဖို. အဆက်မပြတ် တရစပ်ထွက်နေတဲ့ (ပရက္ကမ) စွဲမြဲတဲ့ ဇွဲလုံ.လကို မွေးမြူ ကျင့်သုံးနိူင်ကြပါစေကြောင်း တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါတယ်။
“အလုပ် မဟုတ်တာနဲ. အလုပ်ရှုပ်နေလို. တကယ့် အလုပ်ကို လုပ်ဖို. အချိန် မရှိဘူး။”
လက်ရှိ တို.နိူင်ငံရဲ. နိစ္စဓုဝ လူနေမှုဘဝကို ထင်ဟပ်နေတဲ့စကားပါ။ ကိုယ်လည်း ဒီ မထူးဇတ်ထဲ ဝင်ကနေရင် ဘာမှ ထူးမှာမဟုတ်ပါ။ ဘာမှ မထူးတဲ့သူတွေကြောင့် လောကမှာ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်လာတာ မရှိပါ။
ထူးခြားသာလွန် ကောင်းမွန်မြင့်မြတ် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ အတွေး အပြော အလုပ်တွေနဲ. မိမိအကျိုး အဆွေအမျိုးတို.ရဲ.အကျိုး လောကအကျိုး စွမ်းစွမ်းတမံသယ်ပိုးခြင်းဖြင့် လောကကို အလှဆင်သူများ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပါစို.။
“ပေးနိူင်သူများဖြစ်အောင်လို. မရှိရှိအောင် ကြိုးစားကြပါစို.။”
ပေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကရှိမှ။ ကိုယ်က ကျန်းမာရေးကောင်းပါမှ ကရုဏာ၊ မေတ္တာ၊ ပညာ၊ အာဏာ၊ ဥစ္စာ တစ်ခုခု ရှိမှသာ သူများကို ပေးနိူင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကို တကယ်သနားရင်၊ အများကို တကယ် ချမ်းသာစေချင်ရင်၊ တကယ်သိစေတတ်စေချင်ရင်၊ တကယ် ငြိမ်းချမ်းစိတ်ချလုံခြုံတဲ့ဘဝ ရစေချင်ရင်၊ တကယ် ပြည့်စုံကြွယ်ဝစေချင်ရင် ကိုယ့်မှာ ပေးစရာ တစ်ခုခုတော့ရှိမှ ဖြစ်မယ်။ သူတစ်ပါးကို ငါပေးနိူင်တဲ့အရာ ငါ့မှာ ဘာရှိလဲ ပြန်မေးပါ။ ပေးနိူင်သူများဖြစ်ကြဖို. မရှိရှိအောင် မဖြစ်မနေ ကြိုးစားကြပါစို.။
“ကုသိုလ် ဥစ္စာ ကျန်းခံ့သာ၍ ပညာတန်ခိုး တစ်မျုိးမျိုးမှ အကျိုးမထွက် ထိုနေ.တွက် သက်သက် ဝမ်းနည်းဖွယ်။” (မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
ဒါသည်ပင်လျှင် ရှင်တော်ဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် လျှောက်လှမ်းသွားတော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားလမ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
“ပညာကြောင့် သူတပါးရဲ. ဒုက္ခကိုသိတယ်။ ကရုဏာကြောင့် သူတပါးရဲ. ဒုက္ခကို ပယ်ဖျောက်ဖို. အားထုတ်တယ်။
”အလောင်းတော် သုမေဓာ ရှင်ရသေ့ဘဝပဲ ကြည့်ပါ။ ပညာကြီးလွန်းလို. သတ္တဝါတတွေ သံသရာထဲ တဝဲလည်လည် စုန်ဆန်မျှောပါ ဆင်းရဲနေကြရှာတာကို သိလွန်လွန်းလို.၊ “သတ္တဝါတွေ သံသရာ ဝဋ္ဋ်ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်စေရမယ်ဟေ့” ဆိုတဲ့ မဟာကရုဏာတော် ကြီးနဲ. အားထုတ်တော်မူလိုက်တာလေ~ ~ ~ လေးအသင်္ချေနဲ. ကမ္ဘာတစ်သိန်း။ မဟာကရုဏာတော် အားအစွမ်းသာမရှိရင် ဒီပါရမီ ခရီးကြမ်းကို ဘယ်သူ ဘယ်လို လျှောက်ပါ့မယ်။ ကြံစည်ဖို. အသာထား အသံကြားရုံနဲ. ရွံရှားတုန်ဟီး ကြက်သီးထစရာအမှုကြီးပါ။ လေးအသင်္ချေနဲ. ကမ္ဘာတစ်သိန်း မဆိုထားပါနဲ. နှစ်တစ်ရာလောက်မှ ပြည့်အောင်မနေရတဲ့ ဒီတစ်ဘဝလေးမှာတောင် အလုပ်တစ်ခု အစပြုပြီး အဆုံးပေါက်အောင် မလျှောက်နိူင်ကြတဲ့သူက တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ကိုး ဒဿမ ကိုး မဟုတ်လား။
ခုဒ္ဒကနိကာယ ဣတိဝုတ္တကပါဠိ---------) အဋ္ဌကထာ နှာ-၁၃
ပညာယ သံသာရဒုက္ခနိဗ္ဗိဒါ, ကရုဏာယ သံသာရ ဒုက္ခသဟနံ;
ပညာကြောင့် သံသရာ ဝဋ္ဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ.တယ်။ မဟာကရုဏာကြောင့် သံသရာ ဝဋ္ဋ်ဆင်းရဲကို ကြံ့ကြံ့ခံတော်မူတယ်။
ပညာယ ပရဒုက္ခပရိဇာနံ, ကရုဏာယ ပရဒုက္ခပ္ပဋ္ဋိကာရာရမ္ဘော။
ပညာဖြင့် သူတပါးရဲ. ဒုက္ခကိုသိတယ်။ ကရုဏာဖြင့် သူတပါးရဲ. ဒုက္ခကို ပယ်ဖျောက်ဖို. အားထုတ်တယ်။
”ပညာယ သယံ တရဏံ, ကရုဏာယ ပရေသံ တာရဏံ။
“ပညာဖြင့် မိမိကိုယ်ကို သံသရာ ဝဋ္ဋ်ဆင်းရဲမှ ကူးမြောက်စေ၍ ကရုဏာဖြင့် သူတပါးတို.အား ကူးမြောက်စေတယ်။
”ပညာယ ဗုဒ္ဓဘာဝသိဒ္ဓိ, ကရုဏာယ ဗုဒ္ဓကိစ္စသိဒ္ဓိ;
ပညာဖြင့် ဘုရားအဖြစ် ပြီးစီးတယ်။ ကရုဏာဖြင့် ဘုရားကိစ္စပြီးတယ်။
”ကရုဏာယ ဝါ ဗောဓိသတ္တဘူမိယံ သံသာရာဘိမုခဘာဝေါ, ပညာယ တတ္ထ အနဘိရတိ;
ကရုဏာကြောင့် ဘုရားအလောင်းအဖြစ် သံသရာကိုရှေးရှုကျင်လည်နေရသော်ငြားလည်း၊ ပညာကြောင့် ထို ဘဝသံသရာ၌ ပျော်ပိုက်တော်မမူ။”
တထာ ကရူဏာယ ပရံ အဝိဟိံသနံ, ပညာယ သယံ ပရေသံ အဘာယနံ;“
ကရုဏာကြောင့် သူတပါးကို ညှင်းဆဲတော်မမူ၊ ပညာကြောင့် ကိုယ်တော်တိုင်သည် သူတစ်ပါးတို.ကို (ဘယ်သူ.ကိုမျှ) မကြောက်။
”ကရုဏာယ ပရံ ရက္ခန္တော အတ္တာနံ ရက္ခတိ, ပညာယ အတ္တာနံ ရက္ခန္တော ပရံ ရက္ခတိ;“
ကရုဏာဖြင့်သူတပါးကို စောင့်ရှောက်ရင်း မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။ ပညာဖြင့် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ရင်း သူတပါးကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။
”တထာ ကရုဏာယ လောကနာထတာ, ပညာယ အတ္တနာထတာ;“
ကရုဏာကြောင့် လောက၏ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်၍ ပညာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏။”
천안 (ချောန်နန်) ဒကာများ၏ ကုသိုလ်တော်
မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၃
မဇ္ဈိမယာနနှင့် ဓမ္မယာနအဖွဲ. ၏ အလှူတော်မှတ်တမ်း
၁၁ ကြိမ်မြောက် ဂွမ်ဂျူးတရားပွဲ
မစိုးရိမ်တိုက်သစ် သံဃာ(၂၅၀၀)ကုန် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲ
ဒသမကြိမ်မြောက် တရားပွဲ နှင့် မဇ္ဈိမယာနအဖွဲ့ အစည်းအ...